विश्व – Online Kendra
रुसले बेलारुसलाई क्षेप्यास्त्र दिने !
१२ असार २०७९, आईतवार १२:४९ OnlineKendra
असार १२,काठमाडौँ । रुसले बेलारुसलाई छोटो दूरीका पारमाणविक अस्त्र बोक्ने क्षेप्यास्त्र दिने भएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बेलारुसलाई ‘इस्कान्डर–एम’ नामक पारमाणविक अस्त्र बोक्ने क्षेप्यास्त्र दिने घोषणा गरेका हुन्। यो प्रणालीले परम्परागत र पारमाणविक दुवै प्रकारका ब्यालेस्टिक र क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । जसको मार हान्न सक्ने क्षमता ५ सय किलोमिटर टाढासम्म छ । अबको केही महिनामा बेलारुसलाई इस्कान्डर–एम नामको रणनीतिक क्षेप्यास्त्र प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने तर यसबारेका आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया दुवै देशको रक्षा मन्त्रालयले हेर्ने पुटिनको भनाइ छ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि नै रुस र…
विश्वरुसले बेलारुसलाई क्षेप्यास्त्र दिने !Leaveacomment
विश्वमा ३ हजमर ५ सय जनामा मङ्कीपक्स संक्रमण हुँदा डब्ल्यूएचएनद्वारा महामारी घोषणा
१० असार २०७९, शुक्रबार १३:४४ NewsRoom
असार १०, काठमाडौ । विश्वभर झण्डै ३५०० जना मङ्कीपक्सका संक्रमित भेटिए पछि विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क डब्ल्यूएचएनले यो रोगलाई महामारी घोषणा गरेको छ। व्यापक क्षति रोक्नको लागि विश्वभरि संयुक्त प्रयास हासिल गर्न डब्ल्यूएचएनले मङ्कीपक्सको महामारी घोषणा गरेको हो । कुनै रोगको सङ्क्रमण विभिन्न देश एवं क्षेत्रमा बढेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ठूलो सङ्ख्यामा फैलियो भने यसलाई महामारी घोषणा गरिन्छ। अहिले ३ हजार ४ सय १७ जना भन्दा बढीमा मङ्कीपक्सको संक्रमण पुष्टि भएको डब्ल्यूएचएनले जनाएको छ। यो प्रकोप प्रमुख महाद्वीपहरूमा द्रुत रूपमा फैलिरहेको संगठनले जनाएको छ। मङ्कीपक्स भाइरसका बारेमा धेरै मानिसले ध्यान नदिएको र…
Top Headline, विश्व, शिक्षा/स्वास्थ्यविश्वमा ३ हजमर ५ सय जनामा मङ्कीपक्स संक्रमण हुँदा डब्ल्यूएचएनद्वारा महामारी घोषणाLeaveacomment
असार ९,काठमाडौँ । यतिबेला रुस र युक्रेनबीच युद्ध चलिरहेको छ । विभिन्न सहरहरुमा रुसले एकपछि अर्को हमला जारी राखेको छ । यसैबीच युक्रेनमा पछिल्लो घटनाक्रम तनावपुर्ण गतिले अघि बढिरहेको छ । युद्धको अवस्था के छ ? -रुसी गोलाबारीमा मंगलबार पूर्वी खार्किभ क्षेत्रमा कम्तिमा १५ जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ, जसमा खार्किभ सहरका पाँचजना पनि छन्, रुसले यस क्षेत्रमा आक्रमण बढाउँदै लगेको क्षेत्रीय गभर्नरले बताएका छन्। -युक्रेनी अधिकारीहरूले सेभेरोडोनेत्स्क र लिसिचान्स्कको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सहरहरू नजिकैको फ्रन्ट–लाइन गाउँ टोस्किभकाको पतनको घोषणा गरेसँगै रूसी सेनाहरूले डोनबास क्षेत्रमा गहिरो धक्का दिएका छन्। -बेलायतको…
Top Headline, विश्वrussia ukraine war day 119, russia-ukraine war, russia-ukraine war latest update, रुस–युक्रेन तनावपुर्ण युद्धको पछिल्लो अवस्था के छ ?Leaveacomment
महाराष्ट्र राज्य सरकार संकटमा ! ४० सांसद लिएर गुवाहिटीको होटलमा पुगे मन्त्री सिन्दे
८ असार २०७९, बुधबार १६:०६ OnlineKendra
असार ८,काठमाडौँ । भारतको महाराष्ट्र राज्यका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेको सरकार संकटमा फसेको छ। आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनेका एकनाथ सिन्देले दर्जनौं सांसद लिएर हिँडेपछि गठबन्धन गरी सरकार बनाएका ठाकरेलाई सरकार जोगाउन मुस्किल भएको हो। सिन्दे ठाकरे सरकारका सहरी विकास मन्त्री थिए। मंगलबार बिहान उनी गुजरातको सुरतस्थित एक होटलमा पुगेका थिए। सिन्देले आफूसँगै शिव सेनाका केही असन्तुष्ट सांसद र केही स्वतन्त्र सांसद पनि सँगै लिएर गएका छन्। उनी लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री ठाकेरसँग असन्तुष्ट रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् २०१९ मा भएको महाराष्ट्र विधान सभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल…
विश्वमहाराष्ट्र राज्य सरकार संकटमा ! ४० सांसद लिएर गुवाहिटीको होटलमा पुगे मन्त्री सिन्देLeaveacomment
अफगानिस्तानमा भुकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९५० पुग्यो !
८ असार २०७९, बुधबार १६:०४ NewsRoom
असार ८, काठमाण्डौ । अफगानिस्तानमा मंगलबार राती आएको ६.१ म्याग्नेच्युडको भूकम्पमा परी लगभग हजार जनाको मृत्यु भएको इन्डिपेन्डेन्टले बताएको छ । अफगानिस्तानको पक्तिता प्रान्तमा भूकम्प गएको हो । त्यहाँको विपद् व्यवस्थापनले मृतकको संख्या परिमार्जन गर्दै ९५० पुगेको जानकारी दिएको छ । यस्तै लगभग ६ सय घाइते भएका छन् ।
Top Headline, विश्वअफगानिस्तानमा भुकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९५० पुग्यो !Leaveacomment
अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प : कम्तीमा २५० जनाको मृत्यु, १५० भन्दा बढी घाईते !
८ असार २०७९, बुधबार ११:४३ NewsRoom
असार ८, काठमाण्डौ । अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा २५० जनाको मृत्यु भएको छ भने ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिरबाट घाइतेको सङ्ख्या अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति पक्तिका प्रान्तमा भएको छ । यस प्रदेशमा ठूलो संख्यामा घर भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । यहाँबाट आएको तस्विरमा घाइतेहरुलाई स्ट्रेचरमा बोकेर हिँडेको देख्न सकिन्छ । एक स्थानीय अधिकारीले बीबीसीलाई मृतकको संख्या अझै २५० रहेको तर यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएको छ । घाइतेको संख्या १५० भन्दा बढी रहेको उनले बताए । जानकारीका अनुसार भूकम्पको…
Top Headline, विश्वअफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प : कम्तीमा २५० जनाको मृत्यु, १५० भन्दा बढी घाईते !Leaveacomment
अफगानिस्तानमा ५ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प
८ असार २०७९, बुधबार ११:०० OnlineKendra
असार ८,काठमाडौँ । अफगानिस्तानमा ५ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । त्यहाँको खोस्ट सहरबाट झण्डै ४४ किलोमिटर टाढा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भूकम्पको गहिराइ ५१ किलोमिटर छ । भूकम्पको धक्का अफगानिस्तानसहित पाकिस्तान र भारतका केही क्षेत्रमा महसुस गरिएको खबरमा उल्लेख छ । भूकम्पको क्षतिबारे अहिलेसम्म विवरण आएको छैन ।
विश्वअफगानिस्तानमा ५ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको भूकम्पLeaveacomment
आउँदो डिसेम्बरदेखि प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने क्यानडा सरकारको घोषणा
७ असार २०७९, मंगलवार १२:४८ NewsRoom
असार ७, काठमाण्डौ । क्यानडा सरकारले आउँदो डिसेम्बरदेखि एक पटक मात्रै प्रयोग हुने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । प्लास्टिकको प्रयोग घातक र हानिकारक रहेको भन्दै त्यहाँको सरकारले प्लास्टिकका झोला, भाँडाकुँडा र पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने प्लास्टिका अरु सामग्रीहरु उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो । क्यानडाका वातावरण मन्त्री स्टिभन गिलबल्टले प्लास्टिक प्रदूषण घटाउन सरकार तत्पर रहेको र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले बढ्दो प्रदूषणको कारक प्लास्टिक रहेको र प्रयोग रोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
विश्वआउँदो डिसेम्बरदेखि प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने क्यानडा सरकारको घोषणाLeaveacomment
भिषण वर्षाका कारण भारत र बङ्गलादेशको जनजीवन प्रभावित !
६ असार २०७९, सोमबार ११:५७ OnlineKendra
असार ६,काठमाडौँ । भिषण वर्षाका कारण भारत र बङ्गलादेशको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बाढी र पहिरो तथा चट्याङ्गमा परेर ५९ जनाको ज्यान गएको छ । कयौँ बाढी पहिरोमा फसेका छन् । बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने जनाइएको छ । त्यहाँको मौसम विभागले अझै केही दिन भिषण वर्षाको चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ । बङ्गलादेशमा सरकारी अधिकारीले अहिलेको बाढी सन् २००४ पछिकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताएका छन् । यस्तै, भारतको मौसम विभागले केरला, मुम्बई, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बङ्गाल, ओडिसा लगायत क्षेत्रमा आज पनि ठूलो वर्षाको चेतावनी दिएको…
विश्वभिषण वर्षाका कारण भारत र बङ्गलादेशको जनजीवन प्रभावित !Leaveacomment
नेपालमा रहेका मदरसाबाट भारतविरोधी आतङ्कवादी गतिविधि हुने गरेको भारत सरकारको आरोप
६ असार २०७९, सोमबार ०७:२८ NewsRoom
असार ६, काठमाण्डौ । भारत सरकारले नेपालमा रहेका मदरसाबाट भारतविरोधी आतङ्कवादी गतिविधि हुने गरेको आरोप लगाएको छ। नेपाल-भारत सहसचिव स्तरीय सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपु जेडब्लजीको बैठकमा भारतीय पक्षले यस्तो आरोप लगाएको हो। नेपाल(भारत सीमा व्यवस्थापनको १२औँ बैठकमा भारतीय पक्षले सीमासम्बन्धी विविध पक्षलाई पन्छाउँदै धार्मिक गतिविधिका नाममा नेपालका मदरसाबाट भारत विरोधी आतङ्कवादी काम भइरहेको आरोप लगाएपछि नेपाली पक्षले प्रतिवाद गरेको थियो। बैठक बुधबार र बिहीबार नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलले गरेका थिए। भारतीय टोलीको नेतृत्व त्यहाँको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत…
Top Headline, विश्वनेपालमा रहेका मदरसाबाट भारतविरोधी आतङ्कवादी गतिविधि हुने गरेको भारत सरकारको आरोपLeaveacomment